Nosy Canary Scenery anjara 1 sy 2
fanontaniana Nosy Canary Scenery anjara 1 sy 2
1 taona 10 volana lasa izay #547 by janroth
Efa alaina, ary nametraka ny Nosy Canary Scenery part1 sy 2. Ny fahatsapana voalohany, rehefa nanomboka fisidinana miaraka amin 'FSX Steam Edition ao amin'ny La Palma (GCLA) dia lehibe. Tena tsara toerana manodidina !!
Avy eo aho dia niezaka kokoa ny seranam-piaramanidina ary nahita olana sasany izay te-hamaha amin'ny fanampiana. Ary tamin'ny fiaingana ny Teneriffa Atsimo (GCTS) dia toa ho Hauteur olana na fifandonana eo amin'ny toerana manodidina sy ny fiaingana, satria amin'ny faritra sasany ny fiaingana tendrombohitra miseho ka toa hanakana ny fiaingana ?? Raha Taxi tamin'ny alalan'ny an-tendrombohitra ny sisa amin'ny fiaingana hita amin'ny karazana singa rehetra eo an-tampon'ny izany ?? Rehefa mijery ny seranam-piaramanidina avy amin'ny rivotra, ny zavatra rehetra toa OK. Indrisy anefa izany olana mitranga eo amin'ny seranam-piaramanidina ao Los Rodeos (GCXO). Iray tamin'ny fanamarihana: ny runways amin'ny Gran Canaria (GCLP) Jereo tena fototra. Tsy misy piaramanidina ary tsy misy fotsy ny isan'ny kapoka sisa sy mahitsy ny fiaingana. Ny piaramanidina dia toy ny tsipika mainty. Izany no mainka noho ny fototra flightsim toa piaramanidina.
Manantena aho fa ireo famaritana mazava, ary manantena aho fa hihaino misy soso-kevitra mba hamaha ireo olana.
1 taona 10 volana lasa izay #550 by janroth
Ny olana amin'ny seranam-piaramanidina sy ny GCXO GCTS no voavaha tamin'ny nihazakazaka ny ORBX Vector Configuration fitaovana fampiharana izany hoe disabling ny Airport Elevation Fanitsiana ny GCTS sy GCXO. Ny hany olana izay sisa no tsipiriany ny runways ny seranam-piaramanidina GCLP. Tsy andriko ny soso-kevitra izany.
1 taona 10 volana lasa izay #551 by janroth
Olana voavaha amin'ny alalan'ny fametrahana ny toerana manodidina ny Gran Canaria seranam-piaramanidina (GCLP) avy Rikooo. Ny vokany lehibe mijery !! Misaotra.
Fotoana mamorona pejy: 0.308 segondra